Afaka miova ve ny finoana? - Dinika forum.serasera.org
Afaka miova ve ny finoana?
Fitohizan'ny hafatra : Afaka miova ve ny finoana?
Valiny : 82
endriny - 15/11/2017 16:54
Raha ny fambaran'ireo mpino isan-tokony aloha dia zavatra iray tokony fikirina ary tsy azo hozongozonina ny finoana.
Hitantsika anefa ohatra ny fivakian'ny antom-pinoana noho ny faha-samy hafan'ny fandikana ny boky fiorenana (baiboly, Kaora, sns)
I Jesosy ohatra dia niainga tamin'ny TTaloha ny fampianarany, ary nitondra fanovana fampiharana izany teo amin'ny toerana misy azy: "Manasitra amin'ny andro sabata (ohatra)"
Ny Kristianina indray tsy niainga tamin'io TTaloha io, fa tonga dia nitsindrotsindroka fotsiny ny ampahan'ny fiainan'i Jesosy no nataony, ary misy aza ny mihevitra fa efa tokony foanana ny didy taloha.
Raha ny voalaza ao amin'ny Genesisy ohatra :
1) Voankazo nohanin'i Eva no nahatonga ny fahafatesana
2) Ny lanitra dia habaka eo an'elanelan'ny rahona sy ny tany
Ankehitriny anefa ny mpino dia milaza fa :
1) sariteny fotsiny io voankazo io fa "Firaisana ara-nofo" no tena dikany
2) ny lanitra dia mistery misy ny paradise iainan'ny olomarina mandrakizay
Mampiheritreritra ny zava-boalaza, satria izany kay ilay finoana afaka ovaina: Androany voankazo, rahampitso firaisana. Androany didy 10, rahampitso didy vaovao. Androany lanitra, rahampitso paradise. Androany afaka manao sorona, rahampitso mandrotsa-bola.
Miharena - 15/11/2017 18:17
Anisan'ireo tsindroka fisainana izay resadresahan'ny olona tsy manam-pinoana satria tsy mahafantatra izay hinoany sy tsy mandalina finoana ireo lazain'i Endriny ireo.
Ny tena Mpino dia mahafantatra tsara IZAY miteny ao anaty Baiboly ary mahafantatra tsara izay ambaraNY. Ary tsy azo hozongozonina ilay mino amin'izay fotoana izay.
Ohatra: nitady fahamarinana izy dia nisehoan'IZAY notadiaviny Izay niresaka ilay Fahamarinana niantoboka tamin'ny fisian'IZY Mpahary sy Izy Mpamonjy. Dia miresaka soa aman-tsara ao anaty Soratra nampanoratana azy tsirairay avy momba ny finoana tokony hofantarina. Misy ireo nofohazina satria mbola natory.
Izay mino toy ireo voambara ireo dia mizara amin'ny olombelona namany mba hahalalan'izy ireo koa ny Mpahary izay niantso sy nikarakara azy.
rhaj0 - 15/11/2017 19:38
Miharena Ny tena Mpino dia ..
Ary ny TSY tena Mpino indray izany ahoana ry Miharena?
Tsarovy fa mbola "Mpino" ihany izy ireny ry Miharena an..
Sa eto dia efa TSARAINAO zareo "TSY tena Mpino", ka TSY ho any am-paradisa miaraka aminareo "tena Mpino"? Angaha izy raha badrahodra dia tonga dia pehanareo mafy sahady toa io re ry Miharena?? hotry ny tsy ampahafirin'ny mba "tena izy" koa ianao izany ry Miharena.
Eny azany kouh... Izay ifanarahanareo any eee..
Mahery mantsy ny imazination-nareo "Tena Mpino" ireny ry Miharena.
Dia tena adalan'ireo "TSY tena Mpino" ny miarakaraka na mihaino aminareo "Tena Mpino" ry Miharena.
gasy1zay - 15/11/2017 19:46
Endriny > aiza ao @ baiboly no misy an'io hoe firaisana aranofo ny paoma lazain'ingahy io fa ohatrany tsy mbola hitako an!
Tena mety ho foana tokoa ny finoana ry endriny raha ny baiboly no jerena a! Tadidio fa ny apostazia dia olona nino fahiny fa niverin-dalana na tsy mino intsony
Efa voalaza ao baiboly ao io hoe any amparany any maro ny hihemotra, maro ny hihangatsiaka sns...
Voasoratra ao koa hoe misy ny ho rendrika ny finoany, misy ny finoana maty rehefa tsy arahina asa...
Ka dia mila tehirizina ny finoana fa ny devoly indray tsy hamela anao hino mora foana satria fantany fa avy @ io finoanao io no hahazoanao famonjena sy handovanao ny fiainana mandrakizay.
Miharena - 16/11/2017 09:53
Hombako manana ny resak'i Gasy1zay.
Ny olanao manko Rhaj0 dia tena manana toetran'ny olona maro be izay manakiana befahatany fotsiny ary tena maro dia maro no manana io fomba fijerinao io.
Raha toa ka tsy fantatra hoe fomba fijery ilay izy dia betsaka ny olona no mirona amin'izany ka maka ho raiki-tampisaka ilay fomba fijery entiny miaina sy mijery ny Kristianina. Dia eo izy, sady tsy miditra no tsy mivoaka fa mihazohazo sy miresaka zava-poana eo hatrany.
Io moa dia efa hita taratra ao anaty Baiboly avokoa ny toetran'ny tsy te-hahalala isany fa ialana tsiny aloha fa izay aloha no voasoratra ka tsy hanomezan-tsiny ny mpaminany sy ny mpampianatra ao anaty Baiboly ao.
rhaj0 - 17/11/2017 13:05
ka ilay "TSY Tena Mpino" ve izany ho'a ry Miharena, noho ny fihainoany ireo mpampianatra misy kilema, dia mihinan'ny tsakaokany (ao @ imazination-n'ny "Tena Mpino")??
gasy1zay - 17/11/2017 17:49
Mazava be anie izany rhaj0 e! Raha misy mpampianatra mampianatra anao fa Mahajanga ny renivohitr'i Madagasikara dia fantatrao ny tohiny raha hanala CEPE ny ankizy nampianariny.
Dia toy izany koa misy fiangonana mampianatra ohatra fa azo atao ny manambady L&L sy V&V, dia afaka manambara aminao aho rhaj0 fa raha tsy mbola niala t@ izany fahotany izany izy ireo ka nibebaka marina dia mitovy amin'ireo tsy mino ihany.
Miharena - 17/11/2017 18:12
Ombako manana ny valintenin'i Gas1zay ry Rhaj0.
rhaj0 - 17/11/2017 21:45
gasy1zay ka ilay "TSY Tena Mpino" ... dia mitovy amin'ireo tsy mino ihany.
io izany ilay hoe, ny "TSY tena Mpino" dia (mitovy @) Atheista, sahala @ befilazan'i Miharena?
Dia ianareo koa izany no MITSARA hoe, izatsy "tena Mpino", izaroa "TSY Tena Mpino".
mampalahelo ihany k'lou ireo "TSY tena Mpino" izany, fa dia voa double ao eee...
- sady voambakan'ny Mpampianatra-misy-kilema
- no firan'ny M(pam)pianatra-tsisy-kilema
Aza mba badrahodra ihany "minomino" foana ao, fa tena maivoka mihintsy any @ imazinasion-n'ny sasany an...
gasy1zay - 17/11/2017 22:50
Tena tian'i rhaj0 mintsy ny mi "jouer sur les mots" an! Tsy tena Mpino???
Tena mino izy fa misy Andriamanitra, fa na
1- Tsy nandalina tsara ny baiboly izy dia voafitak'ireo mpampianatra nampianatra zavatra diso na misy kilema ( tadidio fa ny misy kilema mety 80% mitombina fa ny 20% no mivoana na misy sampona)
2- Nandalina ny baiboly ihany izy fa misy zavatra manohitohina ny fisainany ny voasoratra ao dia mitady fiangonana izy na mitady mpitory teny manambara zavatra mampitony ny feon'ny fieritreretany.
Dia efa hitanao rhaj0 fa maro ireo fiangonana manomboka manamasina fanambadiana "gay" na dia mifanohitra @ baiboly aza izany.
Maro ny pasitera/pretra/evanjelista tsy sahy miteny hoe fahotana ny firaisan'ny L+V ivelan'ny fanambadiana
Vitsy ny fiangonana mitory ny fibebahana marina dia lasa mifangaro @ kristianina maro ny fifonana sy ny fibebahana.
Misy ireo kristianina mihevitra fa raha tsy mandoha fahafolo-karena izy ireo dia tsy voavonjy.
Santionany fotsiny ireo rhaj0 fa maro ny fampianarana no tsy mifanahaka 100% @ ny voasoratra ao @ baiboly.
endriny - 18/11/2017 06:21
Ohatra re ireo ry Miharena fa tsy tsindroka.
Ohatra 1) ny didy 10 nomen'Atra, Ary nataony t@ takela-bato mihintsy: aza miasa fa manompoa an'Atra amin'ny Sabata.
Dia niova hoe Alahady ilay Sabata.
Sady tsy misy izany TENA MPINO izany e. Hoy i Jesosy hoe Raha manana finoana ianareo, eny na dia ohatran'ny voatsinampy aza, dia ahafindra tendrombohitra.
Na ilay Jesosy aza dia efa nahafantatra fa tsy misy izany Tena mpino izany, fa mino kely ohatran'ny voatsinampy dia efa izy. Ka ianao indray ity no mamoroporona eto.
Ka asa ho'a na mba misy manana finoana ohatran'ny voatsinampy eto na tsia, fa ilay jamba mangataka eto an-dohan'Analakely mbola tsy nisy nahasitra foana.
endriny - 18/11/2017 06:24
Izaho ange tsy niteny hoe ao anaty baiboly io e, fa mba vakio tsara aloha. Ny nolazaiko dia hoe taloha izany dia voankazo voarara fa izao lasa misy mino hoe ny firaisana ara nofo io voankazo io. Dia jereo eto @ serasera ihany fa betsaka ireo namanao Kristianina no na ambara izany teto
Miharena - 18/11/2017 18:23
Mbola tafiditra amin'ny kilasin'ny mpitazana manao fanakianana ihany anie izany resahanao izany e! Tsy manambara ny hoe IZA no inoana io resahanao io nefa te-hanontany hoe iza ary no tena mino?
Manontany tena aza aho izao amin'io ianao manavaka ny tenanao io sy manavaka ny Kristianina hoe TSY MISY AMINAO VE ALOHA IO JEHOVAH SY JESOA KRISTY IO? na koa hoe TSY MISY AMINAO VE NY MPAHARY ?
Ny fanontaniana manaraka an'izay dia hoe inona izany no tokony hanontanianao ny fanontaniana etsy amin'ny lohateny etsy?
rhaj0 - 20/11/2017 17:08
gasy1zay Tena mino izy fa misy Andriamanitra, fa na
1- Tsy nandalina tsara ny baiboly izy dia voafitak'ireo mpampianatra ...
fa eritrereto tsara azany ry Gasy1zay, fa
- (mety) SAMBATRA ihany izy ao @ izay Fampianarana-misy-kilema azony ao, mitovy aminareo nahazo fampianarana-tsisy-kilema ao ihany io
- (mety) miresaka mivantana @ Atra koa izy avy ao @ izay Fampianarana-misy-kilema azony ao, mitovy aminareo nahazo fampianarana-tsisy-kilema ao ihany io
Ahoana moa no itompoanareo teny hoe, ianareo tsisy-kilema ihany no sambatra sy miresaka mivantana??
Be dia be ny tantaran-Jesosy, izay manoritra tsara, fa ireo noheverina fa TSy "tena Mpino", na Mpanota be akoriny aza, toa ilay teo ankavanana tetsy @ pôtô, dia rahefa misy click tampoka ao, tonga dia avotra HONO.
Koa na "misy kilema" na "tsisy kilema", dia, raha ny fahitako azy, TSISY DIKANY daholo izany.
endriny - 21/11/2017 08:26
Tsy misy mpino eto ry Miharena a, fa ny pesta tsy sitranareo raha tsy niantsoana ny Havana avy any ivelany
Miharena - 21/11/2017 10:55
Fa inona ary no idiran'ny pesta amin'ny finoana aloha?
endriny - 21/11/2017 13:23
Ka tsy manao-pinoana ny mpino eto Madagasikara matoa mbola matahotra pesta e
Miharena - 21/11/2017 13:41
Aza manao valinteny tsy mety aloha. Ny pesta tsy atahoran'ny mino fa izay tsy mino angamba no natahotra.
endriny - 21/11/2017 14:32
Ny finoana taloha izao dia hoe ny andro paska ilay nitsahana teo @ ranomasina mena
Ny finoana ankehitriny hoe ny andro paska nitsangan'i Jesosy tamin'ny maty
gasy1zay - 21/11/2017 16:34
Mila fantarinao tsara rhaj0 ilay fotoana resahina anaty baiboly fa io no tsy mety takatry ny sainareo tsy mino, raha tsy eken'ny sainao ilay izy dia ho resaka mivoana foana ny fifanakalozana eto.
Ho an'ny mino dia fandalovana ny eto an-tany fa mbola misy fiainana mandrakizay rehefa miala ety.
Tsy hoe sambatra ianao ety na mihevitra ny hoe sambatra dia toy izay koa ny miandry anao aorian'ny fahafatesana.
Ka averiko eto fa :
1- Ny tsy mino dia tsy handova ny lanitra
2- Ny mino fa tsy mbola nibebaka na tsy mbola niala t@ fahotany dia tsy handova koa ny lanitra :
Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan’ Andriamanitra? Aza mety hofitahina hianareo: fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin’ olona sy ny sodomita
10 sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan’ Andriamanitra.
Tsy fampianarana pasitera io, na mompera, na evanjelista fa ao anaty baiboly.
Raha kristianina mpino dia tokony hanaiky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra iray manontolo fa tsy ampahany fotsiny.